रब्बी मोशे रातको आदर्शवाद - रब्बी माइकल अव्राहम
रब्बी मोशे मुसाको आदर्शवाद
प्रतिक्रिया > श्रेणी: दर्शन > रब्बी मोशे मुसाको आदर्शवाद
कोबे २ महिना अगाडि सोधेको
म मोशे मुसाले समर्थन गर्ने आदर्शवादको प्रणालीको बारेमा के सोच्नुहुन्छ भनेर सोध्न चाहन्छु,
उसले प्रस्तुत गरेको आदर्शवादी विश्वदृष्टिकोणले व्यापक रूपमा तर्क गर्छ कि सबै वास्तविकता मानसिक हो, मानव चेतनाको उत्पादन हो, जुन ईश्वरको अति-चेतनाबाट उत्पन्न हुन्छ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, वास्तविकता एक प्रकारको सपना हो जुन व्यक्तिगत चेतनामा अवस्थित हुन्छ, केवल वास्तविकता भनेको सबै मानिसहरूले साझा गरेको सपना हो, न कि तपाईको आफ्नै।
1. यो, अन्य चीजहरू बीच, क्वान्टमबाट अध्ययनहरूमा आधारित छ (सम्भवतः मापन, आदिमा अवलोकनको प्रभावसँग सम्बन्धित)।
2. र भौतिकशास्त्रीहरू जस्तै जसले घोषणा गर्छन् कि पदार्थको वास्तविक अस्तित्व स्थापित गर्ने प्रयासहरू सबै असफल भएका छन्, र यदि त्यसो हो भने, अवस्थित एकमात्र वास्तविकता चेतना हो। मानसिक रूपमा।
साथै, मस्तिष्क गतिविधि घट्ने र असक्षम हुने अवस्थाहरूमा - मानिसहरूले सामान्य अवस्था भन्दा धेरै व्यापक संज्ञानात्मक अनुभवहरू अनुभव गर्छन्।
उदाहरणका लागि नजिकैको मृत्युको अनुभव वा केही औषधिको प्रभावमा परेको अवस्थामा। र यसरी यो मौलिक सुपरचेतनको स्थितिमा पुग्छ। ~ / एक एकता। र अधिक।
4. यसबाहेक, यस दृष्टिकोणको लागि धेरै कारणहरू छन्, र यो पनि सरल छ कि विश्वास गर्नुपर्छ भनेर तर्क गर्छन्।
5. र यथार्थवादी विश्वदृष्टि भोली छ। त्यसैले मध्ययुगीन विश्वदृष्टिकोणमा अडिग रहनुको सट्टा आदर्शवादको उन्नतितर्फ लाग्न सक्छ।
(मलाई लाग्छ कि उनीसँग धेरै तर्कहरू छन् तर वास्तवमा ती सबैमा राखिएको छैन)।
यी दृष्टिकोणहरूमा आधारित, त्यहाँ पहिले नै ती व्यक्तिहरू छन् जसले वास्तविकता व्याख्या गर्न सबै प्रकारका मोडेलहरू निर्माण गर्छन्।
मानौं मस्तिष्क, क्यास्ट्रोप विधि अनुसार, केवल "हाम्रो चेतनाले बाहिरी पर्यवेक्षकलाई हेर्ने तरिका" हो। मन र चेतना दुई फरक कुरा होइनन्, तर मन चेतनाको दृश्य र मूर्त प्रतिनिधित्व हो।
प्रश्न ट्यागहरू: आदर्शवाद, मोशे मुसा, क्यास्ट्रोप
Rabbi Moshe Rat एक पूर्व विद्यार्थी हुनुहुन्छ र म निश्चित रूपमा उनको प्रशंसा गर्छु। म उहाँका धेरै धारणाहरू साझा गर्दिन र विशेष गरी कल्पना र आदर्शवादप्रति उहाँको प्रवृत्ति। तपाईंले यहाँ उहाँको नाममा लेखेका तर्कहरू (मलाई विवरणहरू थाहा छैन। मैले पढेको छैन) मलाई तिनीहरूको वैज्ञानिक आधार सहित पूर्ण रूपमा निराधार लाग्छ।
वास्तविकता भनेको व्यक्तिगत चेतनामा रहेको सपना हो भन्ने दाबी मलाई वास्तवमै विरोधाभासपूर्ण लाग्छ। मेरो व्यक्तिगत चेतना को हो? मेरो? मेरो मतलब म अवस्थित छु? म मात्र अस्तित्वमा छ? किन मान्नुहुन्छ कि म मात्रै छ र अरू सबै छैन? अनि बाकि यथार्थ पनि हैन त ? अनि भगवान पनि छ ? उसलाई कसरी थाहा हुन्छ?
र "वैज्ञानिक" आधारको लागि, मैले क्वान्टमको सम्बन्ध के हो भनेर बुझिन। वास्तविकता मा मापन को प्रभाव एक कठिन प्रश्न हो, तर विचारहरु को बारे मा विभाजित छ, र यो आज एकदम स्पष्ट छ कि "मापन" लाई मानव चेतना को आवश्यकता छैन (कम्प्यूटर द्वारा मापन पनि तरंग प्रकार्य क्र्यास गर्दछ), स्वीकार गरिएको कुरा को विपरीत। लोकप्रिय साहित्यमा। र शानदार।
कोबे २ महिना अगाडि जवाफ दिए
म अब उहाँका सबै दावीहरूमा छैन, केवल मैले तिनीहरूको बारेमा धेरै छोटकरीमा गरेको कुराबाट। उहाँको कथा साइटमा केही थप दाबीहरू छन्।
निस्सन्देह उसले अन्य व्यक्तिहरू अवस्थित छ भनी मान्दछ। तर जसरी सपनामा कसैले पनि यस्तो सपना देख्न सक्छ हाम्रो संसारमा चेतनाहरूले चेतना माध्यममा सँगै सपना देख्छन्। कम्प्यूटर गेमको एक प्रकारको उदाहरणले उहाँका शब्दहरूलाई राम्रो तरिकाले चित्रण गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म पनि यो वास्तविकता को लागी एक मेटाफिजिकल दृष्टिकोण को अधिक हो र यो एक सुसंगत दृष्टिकोण हो सोच्ने झुकाव गर्दछ।
तर जे होस्,
यो बिषयमा मलाई अलिकति अप्ठ्यारो छ, यो बिषयमा कसरी छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? वा यस्ता विषयमा?
पार्टीहरूलाई यहाँ वा त्यहाँ कसरी ल्याउन सकिन्छ? र निष्कर्षहरू विचार गर्नुहोस् र निर्णय गर्नुहोस्।
आखिर, यो सबैलाई स्पष्ट छ कि कान्टको अनुसार त्यहाँ वस्तु (नुमाना) सँग वास्तविक ब्रह्माण्डको अस्तित्वको लागि कुनै प्रमाण छैन। तर हामी जहिले पनि घटनासँग मात्र भेट्छौं (हाम्रो अस्तित्व बाहेक) ... तर त्यसो भए किन दोहोरो कुराहरू र घटनाले मात्र काम गर्दछ भनेर मान्नुहुन्न? (एक प्रकारको ओखम रेजर जस्तै यदि यो यहाँ हो भने)
मैले देखेको छु कि तपाईको प्रश्न सामान्य शङ्काको सन्दर्भमा चिप्लो ढलानबाट हो, र सायद कोठरी;)।
तर, यो स्पष्ट छैन कि यो यहाँ आउनु पर्छ किनभने यो एक शंकास्पद दृष्टिकोण होइन, तर वास्तविकता को एक आध्यात्मिक व्याख्या हो।
हुनसक्छ म उल्टो सोध्छु, रब्बीले किन द्वैतवाद मान्छन् र अरू मानिसहरूको अस्तित्व छ र त्यो G-D अवस्थित छ?
मलाई लाग्छ कि यो उसलाई कस्तो "हेर्छ"। र यसमा शङ्का गर्ने कुनै कारण छैन र सामान्य रूपमा उहाँको बुझाइ र भावनाहरू छैनन्? तर यी चीजहरूको लागि पूर्ण व्याख्या प्रदान गर्ने घटनाको विचार आवश्यक रूपमा शंकास्पद छैन किनकि यो अधिक * व्याख्यात्मक * / वैकल्पिक विकल्प जस्तो देखिन्छ। वा यो एक सही दावी हो भनेर तपाईलाई लाग्दैन (किनभने यसले अन्ततः हाम्रो अगाडि एउटा टेबल छ भन्ने धारणालाई विरोध गर्दछ)?
मैले यो पनि सोचेको छु कि तपाईले स्तम्भ 383 मा उल्लेख गर्नुभएको बोहर्स हुन सक्छ यो व्याख्यालाई व्यवहारमा उतार्न धेरै गाह्रो छ, किनभने यो संज्ञा बिनाको भाषा हो (अन्य व्यक्तिहरू बाहेक) तर केवल क्रियापदहरू र तिनीहरूको इन्फ्लेक्शनहरू सहित। तर अर्कोतर्फ, यस्तो देखिन्छ कि कम्प्यूटर गेममा पनि हामी वस्तुहरूलाई अवस्थित रूपमा व्यवहार गर्छौं। र यदि त्यसो हो भने, सम्झौता उपयुक्त र सुसंगत देखिन्छ।
अन्तिम मध्यस्थ २ महिना अगाडि जवाफ दिए
त्यसैले शब्दहरू गनगन गर्नुको सट्टा, ऊ अग्लो छानाको रेलिङमा पाइला टेकेर मृत्युको मुखमा खस्छ र त्यसपछि सपनाबाट ब्यूँझन्छ। वा उसले आफ्नो सपनामा गुरुत्वाकर्षण रद्द गर्ने ख्याल राख्छ र हामीलाई हावामा तैरिरहेका सपनाका कारहरू खोल्छ।
यी शब्दहरू नबुझ्नुहोस्, र निश्चित रूपमा तिनीहरूलाई कसरी छलफल गर्ने भनेर थाहा छैन (न त त्यसो गर्दा कुनै बिन्दु देख्नुहोस्)।
ढिलोको लागि माफ गर्नुहोस् म धेरै व्यस्त थिए र टिप्पणी गर्न चाहन्थे।
मैले यो लाइनमा अंकहरूको संख्या बुझिन।
1. पहिले शब्दहरूको गलतफहमी तिर।
के रब्बीले यो विचार बुझ्न सक्छ कि किनकी हामी सबै जान्दछौं केवल हाम्रो "बोध" हो र कुरा आफैं होइन। त्यसैले यो भन्न सकिन्छ कि वास्तवमा अन्य मानिसहरू बाहेक सबै चीजहरू अस्तित्वमा छन्, केवल "हाम्रो" धारणामा छन्। र हामीले परिकल्पनामा चीजको अस्तित्वलाई जोड्न आवश्यक छैन। ~ सपना जस्तै। यहाँ मात्र यो साझा सपना हो।
यदि त्यसो हो भने।
2. त्यसैले अहिले हामीसँग वास्तविकता व्याख्या गर्न दुई विकल्पहरू छन्।
ए। म एउटा तालिका देख्छु र वास्तवमा त्यहाँ "यस्तो सामग्री" मेरो लागि बाहिरी छ।
बि. म एउटा टेबल देख्छु, तर वास्तवमा त्यो मेरो चेतनामा मात्र हुन्छ बाहिर होइन। उहाँ त्यहाँ एक कारकद्वारा आत्मसात हुनुहुन्छ जसले यसलाई समन्वय गर्दछ Gd भनौं। र संयोजक ताकि धेरै मानिसहरूले पनि देखून्। कम्प्युटरमा एक प्रकारको सहयोगी युद्ध खेल।
यदि त्यसो हो भने, कसरी "सही" व्याख्या रोज्न सकिन्छ?
आखिर, यो निश्चित एट्युटीहरू अनुसार हुनेछ जुन A. को लागि भन्छ कि यस्तो संसार अवस्थित छ। र B को लागि कि हामीले यस संसारलाई आफैले कहिल्यै सामना गरेका छैनौं तर सधैं यो धारणा मार्फत सामना गरेका छौं।
यदि समान डेटा व्याख्या गर्दछ भने सरल व्याख्या छनोट गर्न उचित देखिन्छ र यदि त्यसो हो भने यो B छनौट गर्न लायक छ। तर यो यस मामला मा यो पूर्णतया सही छ कि मलाई स्पष्ट छैन। र अधिकतर पद्धतिगत रूपमा। तर यहाँ धेरैजसो मानिसहरू ए जस्तै सोच्छन्।
र यदि त्यसो हो भने, म सोध्छु कि यो मुद्दामा छलफल गर्नु कत्तिको उचित र व्यावहारिक छ।
बरु, रब्बीलाई कसरी छलफल गर्ने थाहा छैन भने, रब्बी मोसे गलत र उहाँ सही हुनुहुन्छ भनेर किन सोच्छन् ??
३. यस छलफलको कुनै अर्थ किन देख्नुभएको छैन ? के यो छलफल गर्न असमर्थताको कारण हो (र यदि त्यसो हो भने, यस दृष्टिकोणको "गल्ती" बारे कसरी कुरा गर्न सकिन्छ)। वा किनभने त्यहाँ कुनै NFKM छैन (तर त्यो पनि सही छैन, त्यहाँ अस्तित्ववादी र दार्शनिक स्तरमा धेरै छ, यस विधिका समर्थकहरूले दाबी गरे जस्तै)
4. भौतिक रूपमा, सबै प्रकारका प्रमाणहरू ल्याउन सम्भव छ किनकि मुख्य सामग्री वास्तवमा क्षेत्रहरू हुन्, र तिनीहरूले अनौठो व्यवहार गर्छन् (जस्तै प्रकाशको गति भन्दा छिटो, र असीम गति, प्रकृतिको बाह्य नियमहरू देखाउने चार्जको संरक्षण, आदि)। र तिनीहरू वास्तविक वस्तुहरूको रूपमा अवस्थित छैनन् तर केवल "संभावित" वा क्षेत्रको रूपमा। र अझै पनि तिनीहरूले वास्तविकतामा प्रभाव पार्छन्। मलाई लाग्छ कि यसमा भगवान भेट्टाउनेहरू छन्। जसले फिल्डहरू वा प्रकृतिको नियमहरू बनाउँछ।
यहाँ मात्र साझा चेतनाको भागको रूपमा एक कदम अगाडि बढ्नुहोस्।
ढिलाइ माफ गर्नुहोस्, तर छलफल गर्न गाह्रो छ, विशेष गरी तपाईंले मैले व्याख्या गरेका कुराहरू दोहोर्याउँदै हुनुहुन्छ। म संक्षिप्त जवाफ दिनेछु।
1. मैले शब्दहरू बुझिनँ भनेर व्याख्या गरें। यदि केहि छैन भने म पनि छैन। तर मेरो अस्तित्व कसको कल्पनामा छ? मेरो? अनि यदि तिमी भन्छौ म अस्तित्वमा छु र अरु सबै छैन भने तिमीले के पायौ ? यदि तपाइँ पहिले नै केहि अवस्थित छ भनेर मान्नुहुन्छ भने त्यहाँ अन्य चीजहरू पनि अवस्थित छन् भन्ने थप नगर्ने कुनै कारण छैन। आखिर, यो हाम्रो अन्तर्ज्ञान हो।
2. सही व्याख्या भनेको मलाई सहज लाग्छ।
3. वास्तवमा, यो छलफल गर्न सकिँदैन। यसको अर्थ यहाँ सत्यता छैन भन्ने होइन । यो आदर्शवाद मेरो विचारमा सत्य होइन, र छलफल गर्न सकिँदैन। मेरो विचारमा कार्यकारणको नियम पनि त्यस्तै छ र यसलाई स्वीकार नगर्नेहरूलाई छलफल गर्न वा प्रमाणित गर्न अझै असम्भव छ।
4. भौतिक विज्ञान संग गर्न को लागी केहि छैन। भौतिकशास्त्रले वस्तुहरू अस्तित्वमा छैनन् भनी भन्दैन, तर तिनीहरू आवश्यक रूपमा होइनन् जसलाई हामीले बुझेका छौं (न त यो सही हो)।
यी quibbles धेरै चाखलाग्दो छैनन् र म यस छलफलको कुनै मतलब देख्दिन।
भांग २ महिना अगाडि जवाफ दिए
1. यो पूर्णतया सत्य होइन किनकि हो सहमत हुनुहुन्छ कि अन्य व्यक्तिहरू अवस्थित छन्, र गल्ती केवल चेतना नभएका बाह्य चीजहरूको वस्तुगत अस्तित्वको हाम्रो व्याख्यामा छ।
2. म बुझ्छु, केवल यो नाम पनि अतिरिक्त दावीहरूमा बनाइएको हो र यदि त्यसो भए प्रारम्भिक पहल सुधार गर्नुहोस्। एक प्रकारको दार्शनिक प्रमाणको रूपमा र Gd लाई उजागर गर्दै।
3. तपाईं निष्कर्ष निकाल्ने क्षमता र अज्ञानतामा सत्यनिष्ठा र एकरूपता छ कि छैन भनेर जाँच्ने क्षमता हो भने छलफल गर्नुहोस्? तर यदि त्यसो हो भने, तपाइँ तपाइँको दावी को बारे मा के सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ वास्तवमा बयानबाजी मा रुचि देख्नुहुन्छ। र सामान्य छलफलमा ...
4. ठिक छ, यो एक रोचक विषय हो जुन लोकप्रिय साहित्यमा धेरै आउँछ र यहाँ यो साइटमा पनि समय समयमा आउँछ, यसलाई धार्मिक मानिसहरूले अर्को दिशामा प्रयोग गर्छन्, र आदर्शवादीहरू अर्को दिशामा, तर नराली आफैंमा प्रश्नको रूपमा विस्तार चाहिन्छ।
1. के आधारमा तपाईले दाबी गर्नुहुन्छ कि त्यहाँ अन्य व्यक्तिहरू छन्? र तिनीहरूको बारेमा तपाइँसँग प्रत्यक्ष जानकारी छ, तालिकाहरूको वस्तुगत अस्तित्वको विपरित?
3. मैले धेरै ठाउँमा व्याख्या भनेको के हो भनेर व्याख्या गरेको छु। यी दावीहरू छन् कि त्यहाँ जाँच गर्ने कुनै तरिका छैन, किनकि जसले तिनीहरूलाई बलियो बनाउँछ कुनै पनि तर्कलाई त्यसै तरिकाले अस्वीकार गर्नेछ (सायद यो मेरो भ्रम हो)। त्यसैले म यो बहसको कुनै अर्थ देख्दिन ।
1. मलाई लाग्छ कि यो अधिकतर अन्तर्ज्ञान मा आधारित तर्क गर्न सकिन्छ। तर यदि त्यसो हो भने, वास्तवमा अवस्थित तालिका त्यस्तै हो भन।
त्यसैले पाउनुहोस्। के तपाइँ केहि राम्रो देख्नुहुन्छ?
२-३। धन्यवाद। अब मैले बुझें।
4. मैले आधुनिक विज्ञान र विज्ञान र दर्शन र धर्मशास्त्र बीचको सम्बन्धको बारेमा उल्लेख गरेझैं, मलाई सोध्न मनपर्छ, केवल म पहिले यस विषयमा एक थोपामा जान चाहन्छु। किनभने यो साहित्य र लोकप्रिय साहित्यमा धेरै सामान्य छ। यद्यपि यहाँका तपाईंको भनाइहरू एकदमै अचम्मलाग्दो छन् (आधुनिक भौतिक विज्ञानले पनि हामीले बुझेका कुराहरू वास्तवमा यस्तै हुन् भनेर देखाउन सक्छ)। यदि मैले तपाइँको मनसायलाई पूर्णतया राउन्डमा बाहिर निकालेको छैन भने 🙂
इमानदारीपूर्वक मलाई लाग्छ कि यो स्तम्भको लागि एक ठूलो पर्याप्त विषय हो कि तपाईं यसमा एक डाक्टर हुनुहुन्छ।